I Jesoa dia heverin' ny fivavahana silamo ho mpaminany sahala amin' ny mpaminany Mohamady. ʿĪsā ibn Maryam (عيسى ابن مريم "Jesoa zanak' i Maria") no anarana iantsoan' ny Miozolmana an' i Jesoa amin' ny teny arabo. Mitantara ny Kor'any ao amin' ny andalana maro ny amin' ny fiteraham-birijiny an' i Jesoa izay noforonina araka ny didian' Andriamanitra hoe: "Misia" sady notorontoronin' ny fofonain' Andriamanitra.
Ao amin' ny Kor'any, "ny Mesia Jesoa, zanak' i Maria, dia tsy inona fa irak' Andriamanitra, ny Teniny izay nirahiny ho any amin' i Maria, ary fofonaina avy aminy" (Sorata 4.171). Amin' ny maha mpanambara mialoha an' i Mohamady azy dia nitory ny finoana andriamanitra tokana madio izy, nanatanteraka fahagagana, nanasitrana, nanangan-ko velona ny maty ary "mahalala ny zava-miafin' ny fo". I Ibn Arabi dia manome azy ny anaram-boninahitra hoe "tombokasen' ny fahamasinana", "ny vavolombelona lehibe amin' ny alalan' ny fo", fa i Mohamady kosa no "tombokasen' ny mpaminany", "ny vavolombelona lehibe amin' ny alalan' ny lela".
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Jesoa_araka_ny_silamo&oldid=1010357"
Dernière modification le 27 Martsa 2021, à 12:39
Voaova farany tamin'ny 27 Martsa 2021 amin'ny 12:39 ity pejy ity.